Maxkamadda Garoowe oo xukunno adag ku riddey dadkii ku eedaysnaa dilkii & kufsigii Caa’isha Ilyaas (Dil toogasho ah) | Hadalsame Media
Home Wararka Maxkamadda Garoowe oo xukunno adag ku riddey dadkii ku eedaysnaa dilkii &...
Maxkamadda Garoowe oo xukunno adag ku riddey dadkii ku eedaysnaa dilkii & kufsigii Caa’isha Ilyaas (Dil toogasho ah)
(Garoowe) 12 Maajo 2019 – Guddoonka Maxkamada Darajada Koowaad ee Degmada Garoowe, Sheekh Cabdinuur ayaa iminka ku dhawaaqay go’aanka Maxkamada ee kiiska laga wada dhur sugayey ee Caaisho Ilyaas Aadan oo inta kufsi wadareed loo gaystey misna si xun loo diley.
Seddex eedaysane ee kala ah Cabdifataax Cabdirahman Warsame, Cabdisalaan Cabdirahman Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige ayaa lagu xukumay dil toogasho ah, iyadoo uu rafcaan u furan yahay, sida uu sheegay Garsooruhu.
Dhanka kale, Maxkamadda dacwaddan qaadaysa oo muddo ka socotey Garoowe, ayaa fasaxdey 7 eedaysane kaddib markii lagu waayay wax dembi ah.
Qoyska Caaisha ayaa iskaga guurey magaalada Gaalkacyo, iyadoo ay wararku sheegayaan inay qabteen dhulka Soomaalida Galbeed ee Itoobiya hoos taga, waloow warar dambe oo aan la hubin ay taa beeninayeen.
Arrintan ayaa haddii la fuliyo noqonaysa tillaabo dhanka saxda ah loo qaaday, maadaama ay Somalia guud ahaanba aad ugu liidato dhanka cadaaladda bulshada. Xukunka ayaa waxaa fulinaya maamulka Puntland.
Waxaa mar aan dheerayn sidaas oo kale ay Maxkamadda Gobolka Banaadir toogasho ugu xukuntay dad ku eedaysnaa inay nolosha ku gubeen nin uu wiil uu adeer u yahay uu gabar kala dhuuntay.
Previous article”Maraakiibta qaaliga ah ee Maraykanka waxaa ku filan hal GANTAAL!” – Xaaladda Iiraan & Maraykanka oo faraha kasii baxaysa + Sawirro
Next articleLiverpool oo dhanka EPL uga kharash badnaanaysa Man City, xitaa haddii aysan horyaalka qaadin (Sababta & kharashka ay kooxaha dhami helayaan?)